CompTIA Stackable Certifications | Ụzọ CompTIA Career Ụzọ
Kedu ihe CompTIA Stackable Certifications?
Usoro Competia Ụzọ Akụrụngwa nke CompTIA
Ị dị ka nke ugbu a nwere CompTIA Stackable Asambodo?
CompTIA Stackable Certifications e mere n'etiti 2018 ma chọpụta ndị ọkachamara bụ ndị mezuru nsụgharị CompTIA dịgasị iche iche.
A na-agbanwe ihe nkwụnye akụrụngwa ọ bụla n'otu mpaghara n'ime IT, na-egosipụta ọkwa dị omimi nke ozi na ahụmịhe. Ha na-ewere mgbe abụọ wuru CompTIA Career Ụzọ:
CompTIA Stackable Certifications na-agbakwunyere ọzọ n'ime ahụmahụ nhụjuanya onwe ha:
Ọkachamara: Ndị ọkachamara IT na-abanye na 0-2 afọ ahụmahụ
Onye ọrụ: Ndị ọkachamara IT na-eto eto na 2-5 afọ ahụmahụ
Ọkachamara: Mee ka ndị ọkachamara IT guzosie ike na 5 + afọ ahụmahụ
N'isiokwu a, anyị ga-abanye na CompTIA Infrastructure na Cybersecurity Career Pathways, na-enyocha Stackable Certifications ịnweta na ọkwa ọ bụla.
Ịga n'ihu site na CompTIA Akụrụngwa Ụzọ Ụzọ na-akwado ozi gbasara ọtụtụ njirimara nke ikike n'ime ọrụ IT. Ka ị na-esite na Specialist to Professional, ị ga-emepụta ikike n'ime ụlọ ọrụ IT, na-eme ka ọtụtụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ n'ime ya dịkwuo ukwuu.
A na-enyocha Akwadoro ndị a na-akwakọba n'ime ụzọ a site na imezu ngwakọta nke CompTIA A +, Network +, Nche +, Server +, Linux + na Cloud + certifications.
04294 CompTIA Cert Badges_Specialist - CIOSCompTIA IT Operators Specialist (CIOS) - Nweta A + na Network + ị ga-egosiputa nghọta nkenke gị banyere ngwaahịa na akụrụngwa chọrọ maka akụkụ IT njikọ, na ozi gbasara mmekọrịta netwọk.
04294 CompTIA Cert Badges_Specialist - CSSSCompTIA Systems Specialist Specialist (CSSS) - Nweta A + na Linux + igosipụta na ị ghọtara IT mmemme na akụrụngwa dị mkpa ma nwee nghọta miri emi nke Linux na-arụ ọrụ frameworks.
04294 CompTIA Cert Badges_Specialist - CCAPCompTIA Cloud Admin Professional (CCAP) - Nweta Network + na Ígwé ojii + iji gosipụta na ị na-amụ ọrụ nke igwe ojii na nzụlite mmekọrịta.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - CNIPCompTIA Network Infrastructure Professional (CNIP) - Nweta Network + na Server + iji gosipụta mma gị maka ihe nkesa na ịkparịta ụka n'Ịntanet.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - CLNPCompTIA Linux Network Professional (CLNP) - Nweta Network + na Linux + igosipụta gị nkà crosswise n'elu ịkparịta ụka n'Ịntanet n'ihu na Linux na-arụ ọrụ frameworks.
Ịga n'ihu site na CompTIA Cybersecurity Career Pathway ga-egosiputa ike gị na-agafe ebe dị iche iche nke cybersecurity.
Ịgbaso ụzọ ahụ ga-esi n'aka onye mbido mee ka onye nwe ụlọ cybersecurity dị gị, na-egosi na ị kwadoro maka ịrụ ọrụ n'akụkụ akụkụ dị iche iche nke cybersecurity dị iche iche.
A na-enyocha Akwadoro ndị a na-akwakọba n'ime ụzọ a site na ịrụ ọrụ nke CompTIA si A +, Network +, Nche +, CySA + na CASP certifications.
Ụzọ ga-abawanye na nke abụọ 50% nke 2018, na izipụ PenTest + - maka data ndị ọzọ, nyochaa ntụziaka a na PenTest +.
04294 CompTIA Cert Badges-CSISCompTIA Secist Specialist Infrastructure (CSIS) - Nweta A +, Network + na Nche + ma gosipụta nghọta gị banyere netwọk, mmemme PC, ngwa - nakwa na mgbakwunye na aptitudes maka nchekwa ha.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - CSCPCompTIA Secure Cloud Professional (CSCP) - Nweta ma Nchebe + na Ígwé ojii + iji gosipụta nghọta gị banyere ígwé ojii ọhụrụ na ikike ndị chọrọ iji nweta ihe ọhụrụ n'ime azụmahịa.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - CSAPCompTIA ọkachamara na nchekwa nchekwa (CSAP) - Nweta Nche + na CySA + iji gosipụta ike gị ịmata ọdịiche na imeghachi ihe ize ndụ nchebe dị ka ihe dị ngwa dị ka ịchọta na imebi ozi.
CompTIA Network Vulnerability Assessment Professional (CNVAP) - Nweta Nche + na PenTest + iji gosipụta gị ịnwe ihe ziri ezi iji nwalee azụmahịa gị 'maka nchebe ọma.
CompTIA Network Security Professional (CNSP) - Nweta Nche +, PenTest + na CySA + iji gosipụta na ị nwere ihe ziri ezi chọrọ imecha nyocha nke netwọk ma bụrụ ndị ọzọ dị njikere iduga nyocha ọrụ nche.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - CSAECompTIA ọkachamara nchịkọta nchekwa (CSAE) - Nweta Nche +, CySA + na CASP iji gosipụta nchebe ọkachamara banyere nchekwa. Ị ga-egosipụta nhụsianya nchebe zuru oke, nyocha nchedo na nchedo IT n'ime ụlọ ọrụ ahụ.
Expert Infrastructure Security CompTIA (CSIE) - Nweta Nche +, CySA +, PenTest + na CASP iji gosipụta nghọta ọkachamara banyere ihe nchedo nche. Nke a na-egosi nkwenye na-akwado nnwale nke nyocha nchedo, nyocha nyocha na ịnye nchedo IT.
Na ohere na ị ga-ejide ngwakọta nke asambodo achọrọ, ị ga-enweta akwụkwọ nchịkọta CompTIA Stackable. Banye banye na akaụntụ asambodo gị ibudata na gosiputa asambodo ọhụrụ gị ngwa ngwa.
Anyị nyere iwu ka ị gbakwunye otu ihe dị elu na mbido gị ma ọ bụ na LinkedIn profaịlụ iji gosipụta ọnọdụ ọkachamara gị.
Na ohere na ị rụzuru asambodo gị tupu CompTIA ewepụta ihe ndị dị mkpa, ị nwere ike ịnweta Stackable Certifications site na iji hụ na ịnweta nkwenye gị ugbu a.
Ọsọ ọsọ gị nke kachasị ọsọ na-eme ka ị nweta Stackable Certifications
Mezuo asambodo CompTIA gị karịa ngwa omenala. Kwadebe ngwa ngwa na Firebrand na ngwangwa CompTIA na-emegharị ngwa ngwa, ị ga-enwetakwa nkwenye na nkwekọrịta ndị ọkachamara na nso ndị nkụzi a kwadoro:
CompTIA A + - 4 ụbọchị
CompTIA Network + - 3 ụbọchị
CompTIA Nche + - 3 ụbọchị
CompTIA Ígwé ojii + - 3 ụbọchị
Firebrand bụ CompTIA Platinum Partner. Site na nkuzi nke anyi Ụlọ nyocha | Nyochaa usoro mmụta, ị ga-adaba na modul agụmakwụkwọ na ọ dịkarịa ala awa 12 'nkwadebe kwa ụbọchị.
Ị ga-anọgide na ụlọ ọrụ nkuzi anyị, nke na-enweghị ihe ọ bụla na-eme kwa ụbọchị. N'otu aka ahụ, ị ​​ga-anwale nyocha CompTIA gị dịka ị ga-esi na klas gị pụta na nyocha nke Pearson View nke Firebrand.